Xaalada Saaxdheer oo maanta aad u kacsan iyo Saan saan colaadeed oo halkaasi ka jirta | Xaalada Saaxdheer oo maanta aad u kacsan iyo Saan saan colaadeed oo halkaasi ka jirta – Latest News
« Barakac ka Bilowday Degmooyinka Buula Mareer iyo Baraawe.
Ciidanka huwanta oo si buuxda ula Wareegay Buula Mareer »
Xaalada Saaxdheer oo maanta aad u kacsan iyo Saan saan colaadeed oo halkaasi ka jirta
Ciimada Maamulka Khaatumo oo ku sugan Dulleedka Degaanka Saaxdheer ee gobalka Sool ayaa bilaabay dhaq dhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan in ay dib u qabsadaan degaankaasi.
Wararka laga helayo dadka degaanka saaxdheer ayaa shegaya in xaalad kacsnaan ah ay halkaasi ka jirto ka dib markii ay dhaq dhaqaaq ciidan sameeyeen Ciimada Maamulka Khaatumo ee dhawaan halkaasi laga saaray.
Qaar ka mid ah dadka deegaan ka saaxdheer ayaa bilaabay in ay halkaasi ka barakacaan ka dib cabsi xoogan oo ay dagaalka ka Muujiyeen iyagoo si firxad ah ku galaya xadka dalka Ethopia uu la wadaago Dalka Somalia.
Dhanka ciidanka Maamulka Somaliland iyana waxaa ka jira dhaq-dhaqaaq ay ku doonayaan in ay isaga difaacaan haddii ayn weerar ku qaadaan ciidanka Maamulka Khaatumo.
Xaaladan siyaasadeed ee ka jirat degaanka Saaxdheer ayaa si weyn looga dareemayaa degaano ka tirsan gobalka Sool,inkastoo xaalada ay salka ku heyso sheegashada degaankaasi oo muran xoog leh uu ka taagan yahay.